Sarimihetsika 10 sy andian-tantara feno famoronana tsy azonao hadino | Famoronana an-tserasera
«Mur de cinema» nataon'i moltilearn dia nahazo alalana tamin'ny CC BY 2.0
Mpankafy zavakanto iza no tsy nanonofy hanana fiainana bohemia, miaina amin'ny arabe manan-tantara any Venise, na any Paris, ao amin'ny distrikan'i Montmartre? Iza no mbola tsy voatosika rehefa nahita horonantsary izay manohina ny famoronana?
Ireny sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika mahafinaritra ireny dia hahatonga anao handositra vetivety amin'ireo toe-javatra tsara tarehy ireo, izay kanto ny fiainana amin'ny lafiny rehetra. Mpifanila vodirindrina mahafinaritra, olo-malaza, tantara mitantara mahafinaritra… andao hanomboka!
4 Ity dia zavakanto (2017 - ankehitriny)
6 Mamatonalina any Paris (2011)
7 Da Vinci's Demons (2013-2015)
8 Nofy ratsy alohan'ny Krismasy (1993)
10 Genius Picasso (Andiany 2 amin'ny andiany, 2008)
Kilasika ho an'ireo tia ny fiainana bohemia. Ity hatsikana tantaram-pitiavana frantsay tantanan'i Jean - Pierre Jeunet ary starring Audrey Tautou dia mipetraka ao amin'ny distrikan'i Montmartre any Paris, iray amin'ireo ivon-toerana kanto par tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Tena mandrisika ny mahita ny fahatsorana sy talenta famoronana lehibe nataon'i Amélie, ary koa ny fahavononany hanatratra ny fahasambaran'ny hafa amin'ny fomba tsy fantatra anarana.
Ity sarimihetsika ity dia mampiseho ny fahaiza-mamorona sy ny loko amin'ny sehatra rehetra, toy ny amin'ny rehetra sarimihetsika Tim Burton eccentric. Izy io dia ny fampifanarahana ny tantara malaza nosoratan'i Roald Dahl sy ny kintana Johnny Depp mamirapiratra. Fialam-boly sy zavakanto marobe.
Ilay genius Woody Allen dia faly aminay amin'ity sarimihetsika bohemian tena izy ity. Ireo mpihetsiketsika, Penélope Cruz, Javier Bardem ary Scarlett Johansson, dia mitondra antsika any amin'ny lafiny mampihetsi-po indrindra an'ireo mpanakanto, izay ny fidiran'izy ireo sy ny volony dia hampifandraisinay mandra-pahatapitry ny sarimihetsika.
Ity dia zavakanto (2017 - ankehitriny)
Ity andiam-baovao mahomby ity, tarihin'ny mpampita hafatra Ramon Gener, manitrika antsika amin'ny tantaran'ny zavakanto amin'ny alàlan'ny fihetsem-po, tena mora sy mahafinaritra ny mianatra hevitra mety ho matevina. Hiafara amin'ny fahatakaran-javatra sy fankasitrahana ireo sanganasa kanto malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra ianao. Andian-tantara izay tsy tokony halahelo ny olona tia zavakanto.
Sarimihetsika mampihetsi-po novokarin'i Steven Spielberg izay nandresy Oscars telo, iray ho an'ny Best Art Direction. Ary io dia, ny pitsopitsony rehetra dia karakaraina amin'ity tantara ity, izany mampita antsika amin'ny fotoanan'ny geishas, ​​mpanakanto Japoney tena izy. Mampiseho amintsika ny fombafomban'izy ireo amin'ny fitafiana sy fitafy makiazy, ny dihin'izy ireo sy ny mozika ary koa ny fitondran-tena marefo eo amin'ny fiarahamonina, indrindra amin'ny lanonana dite malaza.
Mamatonalina any Paris (2011)
Klasika iray hafa notarihin'i Woody Allen angano. Amin'ity tranga ity, ity sarimihetsika tantaram-pitiavana ity mitondra antsika any amin'ny tanànan'ny bohemia any Paris amin'ny taona 20, fako mamorona sy hatsarana. Mpilalao an'i Owen Wilson, Marion Cotillard, ary Rachel McAdams.
Ity andiany ity dia manambatra singa ara-tantara, mahafinaritra ary manaitra, mampiseho antsika ny ain'ilay manam-pahaizana Leonardo da Vinci. Ao amin'ny Renaissance Florence tamin'ny taonjato faha-XNUMX, mahafinaritra antsika amin'ny tantaran'ny fianakavian'i Medici, ny lanjan'izy ireo ny zavakanto, ary ny fomba namelabelaran'i Leonardo ny heviny lehibe.
Nofy ratsy alohan'ny Krismasy (1993)
Klasika quintessential iray hafa izay tsy tokony halahelo ny olon-tiana kanto. Horonantsary mihetsika miorina amin'ny saribakoly (voalaza fa manodidina ny 227 no naorina hanehoana ireo endri-tsoratra samihafa), tarihin'i Tim Burton. I Jack Skellington no mpilalao voalohany, taolam-paty malaza iray izay niteraka fivarotana marobe, novokarin'ny mpanakanto an-tapitrisany eran'izao tontolo izao, tamin'ny endrika fanart.
Sarimihetsika mahafinaritra hafa napetraka tamin'ny fiainana bohemia Paris tamin'ny taona 1900, ao amin'ny cabaret Moulin Rouge malaza. Izy io dia mozika iray, izay fanta-daza manerantany ny feon-kira misy azy. Starring Nicole Kidman and Ewan McGregor, dia, tsy isalasalana, tantaram-pitiavana tsy hay hadinoina izay hametahana antsika amin'ny efijery hatramin'ny farany.
Genius Picasso (Andiany 2 amin'ny andiany, 2008)
Genius dia andiany amerikana novokarin'ny National Geographic izay mitantara ny fiainan'ny olona malaza iray isaky ny vanim-potoana. Amin'ny vanim-potoana faharoa amin'io, miresaka momba ny fiainan'ilay mpanao hosodoko espaniola lehibe Paul Picasso, lalaon'i Antonio Banderas. Mahaliana ny mahita ny fomba nandaozan'i Picasso ny asany kanto tao amin'ny oniversite, hanatevin-daharana andiana mpanakanto tia ny fiainana bohemia.
Inona no andrasanao manomboka manomboka milentika tanteraka amin'ny fiainana bohemia lehibe indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Sarimihetsika 10 sy andian-tantara feno famoronana tsy azonao hadino
Adobe dia namoaka Photoshop Camera ho an'ny Android sy iOS